Thursday July 11, 2019 - 09:14:54 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Bulshada Rayidka ah ee Somaliland waxa ay walaac wayn ka muujinayaan colaadda soo noq-noqotay ee Degmada Ceel Afwayn ku dhex maraysa Beelaha walaalaha ah ee degaankaas ku wada nool. Bulshada Rayidka ah ee Somaliland waxa ay ku baaqayaan
in sida ugu dhakhsaha badan loo joojiyo cunfiga iyo dhiiga dadka walaalaha ah ee hawl yaraanta ku daadanaya.
Bulshada Rayida ah ee Somaliland waxa ay rumaysanyihiin si loo helo nabad gelyo waarta oo ka hirgasha deegaanadaas waa in Xukuumaddu xoojiso joogitaanka hay’adaha Dawliga ah ee Deeganadaas, isla mar ahaantaana kor loo qaado adeegyada aasaasiga ah ee loo fidinayo dadyawga ku nool guud ahaan Gobolka Sanaag, gaar
ahaan Degmada Ceel Afwayn. Bulshada Rayidka ah ee Somaliland waxa ay soo jeedinayaan in Xukuumadda Somaliland siyaasad cad oo dhaqan gasha ka yeelato lahaanshiyaha dhulka, kala xadaynta dhul daaqsimeedka iyo degsiimooyinka, korodhka magaalowga iyo
khayraadka dabiiciga ah. Bulsharada Rayidka ah ee Somaliland waxay ku boorinayaan Xukuumadda in ay ka hirgeliso deegaanadaas mashaariic horumarineed oo shaqo u abuuraya dhalinyarada Deegaankaas oo u baahan in loo abuuro yididiilo iyo Rajo nololeed oo ka joojisa in ay
qayb ka noqdaan colaadda.
Ugu dambayn Bulshada Rayidka ah ee Somaliland waxay ugu baaqayaan dhamaan wax-garadka, Aqoonyahanka, Culimada, Madax dhaqameedka, Dhalinyarada iyo Haweenka deegaankaas in loo hawl galo nabadgalyo waarta oo ka hirgasha Degmada